I-Dana Mod Apk Khuphela i-V3.0.6 Simahla ye-Android [yakutshanje]
Ukuba uhamba ngengxaki yemali, ngoku ungafumana imali okanye wenze ukuthengiselana usebenzisa iDana Mod Apk. Yisoftware yasimahla onokuyikhuphela kunye nokuyisebenzisa kwiifowuni eziphathwayo ze-Android.
Ke, kweli phepha, uza kufumana ingxelo eguqulweyo yesicelo. Oko kukunika ibhalansi yeakhawunti engenasiphelo yeyona nto ilungileyo kubasebenzisi.
Yintoni iDana Mod Apk?
Ungayikhuphela njani i-Dana Mod Apk?
I-Dana Mod Apk sisipaji sedijithali apho ungagcina iiasethi zakho. Yenzelwe abantu baseIndonesia abaneefowuni eziphathwayo ze-Android kwaye bafuna ukugcina imali yabo kwizipaji zedijithali. Ikwabonelela ngeentlawulo ezenziwa kwi-Intanethi kunye nokuthengiselana kwabasebenzisi.
Ayisiyo kuphela intengiselwano yemali, kodwa unokukhetha ukufumana imali-mboleko. Ukuba unomdla wokufumana inkxaso mali ngokuboleka imali, ke olu lolona khetho lufanelekileyo kuwe njengoko benikezela ngamaxabiso enzala aphantsi. Apho unokuba neemveliso ezininzi.
Nangona kunjalo, esi sicelo sifumaneka kuphela e-Indonesia kwaye ayisebenzi ngaphandle kwelizwe. Nokuba ungummi osemthethweni kwelo lizwe, unokusebenzisa ngenye indlela, awufanelanga. Ke, kungcono ukuba uphephe kwaye akufuneki uchithe ixesha kunye nemali yakho.
Nangona kunjalo, ngomnye wemithombo efanelekileyo kunye efanelekileyo yokugcina iiasethi zakho zedijithali kwaye wenze ukuthengiselana ngerhafu ephantsi. Uya kukhuphela i-Dana Mod Apk Unlimited Saldo, okuthetha ukuba ngoku ungagcina ibhalansi engenamda kwifowuni yakho.
Ke, ukuba ujonga imali mboleko ngqo eIndonesia, unokusebenzisa Ikhonkco Dua Apk kwaye I-Mobil Tunai. Ezi zezinye iiapps zasimahla onokuzikhuphelela kwaye ufumane imali mboleko yangoko ngexabiso lenzala elinexabiso eliphantsi. Ke, kuya kufuneka uzame nayiphi na usetyenziso ukuze ufumane imali.
igama UDana Mod
ubungakanani 7.25 MB
umbhekisi Ubungakanani be-e
Igama lepakheji com.dana.userapplication
Nazi iintlobo ezahlukeneyo zeempawu onokuthi ube nazo kwiDana Mod Apk. Kungenxa yokuba olu luguqulelo oluguqulweyo lwe-app, ke ngoko, zininzi izinto ezintsha ezongezwe abalandeli. Ke, unokufunda oku kulandelayo ukuze wazi malunga neapps.
Yinkqubo yasimahla yokukhuphela kunye nokugcina iiasethi zakho zedijithali.
Ngoku ungagcina isixa esingenamkhawulo sebhalansi kwisipaji sakho.
Thumela imali kwiiakhawunti zakho zebhanki.
Thenga okanye wenze ivenkile ngokusebenzisa amaqonga akwi-Intanethi.
Inonxibelelwano olulula nolusebenzisayo.
Inika isipaji esikhuselekileyo.
Fumana iimali-mboleko ngamaxabiso enzala aphantsi.
Ukuze ukhuphele usetyenziso, kuya kufuneka usebenzise ikhonkco endiza kwabelana ngalo ekupheleni kweli phepha. Nje ukuba ucofe kwikhonkco, inkqubo iya kuqala kwaye ithathe imizuzu embalwa ukugqiba inkqubo.
Emva kwexesha ungayifaka ngokucofa okanye ucofe kuyo. Emva koko yazisa usetyenziso kwaye ubhalise okanye wenze iakhawunti entsha ukuba umtsha kwi-app. Emva koko dlulisa imali okanye wenze nantoni na ofuna ukuyenza.
Le yeyona wallet yidijithali ibalaseleyo enokukhetha ukugcina ibhalansi engenamda. Khuphela i-Dana Mod Apk ngokusebenzisa ikhonkco elinikezwe apha ngezantsi.
exhonyiweyo apps, imvelisoephawulweyo UDana Mod Apk, Inkqubo yeDana Mod, Dana Ukukhuphela Mod